Ogaden News Agency (ONA) – Dhalinta Qoomiyada Axmaarada oo Baroordii Uqabanaysay Xasuuqii Bishuft.
Dhalinta Qoomiyada Axmaarada oo Baroordii Uqabanaysay Xasuuqii Bishuft.
Posted by Dulmane	/ October 2, 2017
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Bahardar ee xarunta Gobolka Axmaarada ayaa sheegaya in ay dhalinta Gobolka Axmaaradu qabanqaabinayaan baroordiiq ay usameeyaan xasuuqii bishii October ee kal hore kadhacay Gobolka Oromia.
Dhalinta Gobolka Axmaarada ayaa sheegtay in ay aad uga xunyihiin boqolaalkii shacabka ahaa ee ciidanka wayaanuhu ay kuxasuuqeen magaalada Bishuft ee Gobolka Oromia, kuwaas oo isugu yimid xaflad dhaqameed ay sanadkasta qabsadaan dadka qoomiyada Oromadu.
Sida xogta aan kuhelayno dhalinta qoomiyada Axmaarada udhalatay ayaa sheegtay in ay baroordiiqda kuqaban doonaan garoonka kubada cagta ee magaalada Bahardar halkaas oo lagu wado in ay kaqabsoonto ciyaar dhexmari doonto labo kooxood oo kadhisan Gobolka Axmaarada.
Mid kamid ah qaban qaabiye yaasha baroordiiqda looqabanayo gumaadkii dadka Oromia ayaa sheegay in ay mudaharaad wayn kabilaabi doonaan garoonka kubada cagta ee magaalada Bahardar, halkaas oo sida uusheegay ay kumuujin doonaan sida ay uga xunyihiin wixii kadhacay kal hore bishan oo kale magaalada Bishuft.
Dhinaca kale xukuumada wayaanaha oo aad uga xun talaabada ay qaadayaan dhalinta Gobolka Axmaaradu ayaa ciidamo aad ubadan soodhoobay magaalada Bahardar, waxaana laga cabsi qabaa in ay gacanta isula tagaan ciidanka gumaysiga iyo dhalinta mudaharaadaysa.
Guud ahaan shucuubta kala duwan ee wadanka gumaysiga Itoobiya kudhaqan ayaa kuxun xasuuqa arxan darada ah ee ciidamada wayaanuhu ay kawadaan guud ahaan wadanka, waxayna shacabku si isku mid ah udareensan yihiin xasuuq wadareed yada kadhacay Ogadenia, Oromia iyo dhulka Axmaarada.